Semalt Expert dia mamaritra ny Arafoditry URL ao amin'ny A1
Ny tranonkalan'ny fako dia mitaky ny fanangonana na fanangonam-baovao amin'ny tranokala mankany amin'ny fametrahana tahirin-tsakafo ao an-toerana. Azo atao ny manala ny angon-drakitra avy amin'ny tranonkala iray ary mamonjy azy amin'ny toerana misy azy amin'ny fampiasana ny tranokala URL A1. Azonao atao ny mampifangaro sy mamorona fitaovana samihafa amin'ny tranonkala ahafahana manao tahiry tahirin-tsakafo. Ankoatra izany, afaka mamaha ny URL ianao mba hamehezana ny angona sy ny famoronana CSV ary koa ny SQL rakitra. Azonao atao ny mandefa an'io vaovao io any anaty fiara iray eo an-toerana na manangona izany ao anaty tahiry toy ny SQL databases.
Ity torolalana SEO ity dia manana toro-marika manan-danja amin'ny fampiasana tranokala URL iray amin'ny fahombiazana.
Mba hanombohana, mila maka sy mametraka ny rindran-tranonkalan'ny tranokala A1. Ity rindrambaiko dia mandeha amin'ny Windows OS toy ny Windows 10/8/7 / Vista / XP / 2008/2003 ary koa ny Mac OS rafitra toy ny macOS / OS X - Yosemite na vao haingana. Ity fitaovana ity:
Manana ny haben'ny rakitra maimaim-poana amin'ny 6.09MB fotsiny.
Ny version 8.x dia tsy mila vidin'ny abidy.
Misy fotoam-pitsapana tanteraka amin'ny 30 andro hanombanana ny fahombiazany.
Pricing: $ 0 ho an'ny dikan-teny maimaim-poana ary koa $ 49 ho an'ny version professionnaly.
Misy ny vokatra maimaimpoana maoderina alohan'ny aorian'ny fividianana..
Ny endri-javatra mahafinaritra miaraka amin'ny tranokala URL A1 dia ny hoe ny akanjo rehetra dia mirakitra ny versione 8.x. Ankoatra izany, ny olona dia afaka manatsara ny fizika 9.x na oviana na oviana izy io alohan'ny hamaranana ny fe-potoana 1yr.
Fampidiran-drakitra amin'ny tranokala miaraka amin'ny tranokala iray URL
Afaka manatontosa asa maro mahomby ao amin'ny Internet ianao. Ireo fepetra ireo dia ahitana ny fanasokajiana sy famakiana angona avy amin'ny loharano toy ny tranokala fitsangatsanganana, hotely, tahiry ary toetr'andro. Ny olona ihany koa dia afaka mampiditra ny angona tranokala voasintona amin'ny algorithms sy fitaovana isan-karazany. Ny olona dia afaka manaisotra fitaovana entana avy amin'ny tranonkala iray hafa ary mamonjy azy ireo amin'ny format iray izay mifanaraka amin'ny tahirin-teninao.
Ny tranonkala URL mpandidy dia spider manerantany. Rehefa mikitika dia afaka mahavita asa maro toy ny fanivanana URL. Afaka mifehy ny haingam-pandehanana ianao mba hahafahanao mamantatra ireo zavatra ilaina rehetra ilaina, anisan'izany ny tranonkala.
Ny angona angon-drakitra
Ny fanoritsoranana A1 dia maneho matetika ny fanehoan-kevitra matetika izay mety mifanaraka amin'ny karazana data tianao. Misy ihany koa ireo fitaovana ankafizin'ny mpampiasa izay manampy amin'ny fisavana ny fomba fitantanana ny angona. Azonao atao ny mamorona ny fanehoan-kevitra ilaina amin'ny fampahalalana tianao.
Ho fehin-kevitra, ny tranokala URL an'ny tranokala A1 dia afaka mamela ny fampahalalam-baovao ao amin'ny tranokala. Misy endrika maro izay ahafahanao manondrana angona avy amina rohy URL. Amin'ny ankapobeny, azonao atao ny mahazo angona amin'ny endrika toy ny CSV na ny SQL. Azo atao ny fametrahana automation. Azonao atao ny manangana fandaharam-potoana fametahana ny fanangonam-baovao. Miaraka amin'ny fitsapana maimaimpoana maimaim-poana 30 andro, afaka vonona hanamboatra ny fanivanana rakitra amin'ny tranokala toy ny tranokalam-baovao ianao Source .